musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » dzidzo » Yakavanzika Resort Inopa madhora zviuru zviviri muCaribbean neAsia
Anguilla Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Caribbean • Dominican Republic Kuvhuna Nhau • dzidzo • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Resorts • Kutarisirwa • Sri Lanka Kuputsa Nhau • Thailand Kuputsa Nhau • ushanyi
Yakavanzika Resort mupiro
Mune imwe nguva apo zvinoita sekunge zvese zvatinonzwa zuva rega rega inyaya nezve kufa, kutya, kuratidzira, uye mhosva, zvinoita mweya wakanaka kunzwa nezve chimwe chinhu chiri kufamba mushe. Kunge mamirioni emadhora ari kupihwa kunharaunda kuti dzitsigire dzidzo. Uye mune iwo mutsara wepfungwa, ÀNI Private Resorts yakazivisa kuti yakapa madhora mamirioni maviri pazvivakwa zvekuchikoro nemakomputa kunharaunda dzemunharaunda mune yega yenyika nyika zvivakwa zvavo zvirimo.
Nyika yega yega ichagamuchira chipo che $ 500,000 iyo yakabhadharwa zvizere neÀNI Private Resorts, uye Tim Reynolds Foundation.
Ichi chirongwa ndechekuwedzera Computer Science dzidzo uye nekuvandudza dzimba dzekudzidzisa, senge kukwidziridza maraibhurari, uye dzimba dzekudzidzira munyika dzine ÀNI Yakavanzika Resorts.
Izvi zvinowedzera kusimbisa kuzvipira kwekambani kubatsira nedzidzo uye kutsigira nharaunda dzemunharaunda.
Kuvaka kugadzira marabhodhi matsva emakomputa mune ese ari maviri Angwira uye Sri Lanka ichatanga gare gare gore rino, ichiteverwa nechikoro chitsva chepuraimari mutaundi reRio San Juan. PrivateNI Private Resorts parizvino iri kutaurirana nevadzidzisi veThai kuti vaone kuti iyo $ 500,000 ichabatsira zvakadii. Tim Reynolds uye ÀNI vanofara kugona kupa nzanga dzenzvimbo nenzvimbo dzakazorodzwa uye dzemazuva ano kuti dzibatsire izvozvi nezvizvarwa zvinotevera.
Tim Reynolds, muvambi / muridzi we ÀNI Private Resorts, anobatsira vanhu nekuzvipira kwakasimba kunatsiridza hunyanzvi nedzidzo nzvimbo pasirese. Akaitawo zvakakurisa kutsvagisa kwekurapa uye zvivakwa - iye amene akapona mukukuvara kwakanyanya kwemuzongoza. Tim akatanga iyo yakakwana isiri purofiti INI Art Zvikoro muThailand, Anguilla, Sri Lanka, iyo US, uye Dominican Republic kubatsira vanoshuvira maartist kuzadzisa zviroto-zvakavakirwa zviroto kuburikidza neiyo yemahara, yakazara kudhirowa uye kupenda kosi. Mukubatana nechirongwa chedzidzo, izvo zvikoro zvinobatsira vadzidzi kushambadza nekutengesa mabasa avo kutenderera pasirese kuburikidza nemaratidziro egalari, uye online kuburikidza newebhusaiti yeiyo resort: ÀNI Art Gallery. 100% yemari inowanikwa kubva mukutengeswa kweese artworks inoenda yakananga kune maartist.
Reynolds anodada anoratidza hunyanzvi kubva kuvadzidzi kunzvimbo dzake dzekutandarira uye vashanyi vanogona kutenga mifananidzo yekutanga sechiyeuchidzo chekugara kwavo kuzvikoro zvemuno.
"Kusarudzwa uye mhando yemifananidzo kubva kuvadzidzi pane ese matanhatu eÀII Art Academies zvinoshamisa kwazvo. Ticharamba tichipedza kudzidza maartist makuru kuburikidza nemaAcademy kwemakumi emakore uye tinofara nezvivakwa zvitsva zviri kuvakwa kuwedzera zvirongwa zvedu zvedzidzo munharaunda dzenharaunda, ”akadaro Reynolds.
"ÀNI yakazvipira kukwidziridza nharaunda dzatinogovana nevanhu veko uye nekuendesa makomputa nekuvandudza zvivakwa zvesainzi zvemakomputa, vadzidzi vanozokwanisa kudzidza nekuita raramo yakanaka vasina kusiya nharaunda," akapedzisa Tim Reynolds.